Politika momba ny fiainana manokana - ExoSpecial
Ao amin'ny ExoSpecial, iray amin'ireo laharam-pahamehanay ny tsiambaratelon'ny mpitsidika anay. Ity antontan-taratasy Politika momba ny fiainana manokana ity dia misy karazana fampahalalana izay angonin'ny ExoSpecial sy ny fomba ampiasana azy io. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Ity Politika momba ny fiainana manokana ity dia mihatra amin'ny hetsika an-tserasera ihany ary manan-kery ho an'ny mpitsidika ny tranokalanay momba ny fampahalalana izay nozarainy sy/na nangonin'ny ExoSpecial. Ity politika ity dia tsy mihatra amin'izay vaovao voaangona ivelan'ny aterineto na amin'ny alalan'ny fantsona hafa ankoatr'ity tranonkala ity.
Amin'ny fampiasana ny vohikalanay, dia manaiky ny fitsipiky ny fiainana manokana izahay ary manaiky ny fepetrany.
Fampahalalana izay angoninay
Mahalana izahay no manontany ny mpampiasa momba ny mombamomba manokana. Na izany aza, rehefa manao izany izahay, dia hazava aminao ny mombamomba anao izay asaina omena anao, sy ny antony angatahana anao hanome izany, amin'ny fotoana hangatahanay anao hanome ny mombamomba anao manokana.
Raha mifandray aminay mivantana ianao dia mety hahazo fampahalalana fanampiny momba anao toy ny anaranao, adiresy mailaka, laharana an-tariby, ny votoatin'ny hafatra sy / na apetaka azonao alefaso anay ianao, ary misy fampahalalana hafa azonao nofidinao hanome.
Ahoana ny fampiasanay ny fampahalalana anao
Ampiasainay amin'ny fomba isan-karazany ny fampahalalana izay angoninay;
Omeo, miasa ary tazomy ny tranokalanay
Hatsarao, ataovy manokana ary manitatra ny tranokalanay
Fantaro sy hadihadio ny fomba fampiasanao ny tranokalanay
Mamolavola vokatra, serivisy, endri-javatra ary fampiasa
Mifandraisa aminao, na mivantana na amin'ny iray amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminay
Alefaso mailaka, hafatra an-tsoratra na mailaka ara-batana ianao
Mitadiava sy misoroka ny fampiasana hosoka na tsy ara-dalàna ny tranokalanay
ExoSpecial dia manaraka fomba fanao mahazatra amin'ny fampiasana rakitra log. Ireo rakitra ireo dia mirakitra ny mpitsidika rehefa mitsidika tranokala. Ny orinasa fampiantranoana rehetra dia manao izany ary ampahany amin'ny fanadihadiana momba ny serivisy fampiantranoana. Ny fampahalalana nangonin'ny rakitra dia ahitana ny adiresy Internet protocol (IP), karazana navigateur, Internet Service Provider (ISP), mari-pamantarana daty sy ora, pejy fanondroana / fivoahana, ary mety ny isan'ny kitika. Tsy mifamatotra amin'izay fampahalalana azo fantarina manokana ireo. Ny tanjon'ny fampahalalana dia ny famakafakana ny fironana sy ny fanatsarana ny tranokala.
Tahaka ny tranokala hafa rehetra, ExoSpecial dia mampiasa 'cookies'. Tsy mangataka ny fanekenao hampiasa cookies izahay. Ireo cookies ireo dia ampiasaina hitehirizana fampahalalana ao anatin'izany ny safidin'ny mpitsidika, ary ny pejy ao amin'ny tranokala izay nidiran'ny mpitsidika na notsidihina. Ny fampahalalana dia ampiasaina hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fampifanarahana ny atiny pejin-tranonkala mifototra amin'ny karazana navigateur sy/na fampahalalana hafa.
Mampiasa dokam-barotra izahay mba hahazoana vola amin'ny ExoSpecial. Ny sasany amin'ireo mpanao dokambarotra ao amin'ny tranokalanay dia mety mampiasa mofomamy sy fanilo web. Ny tsirairay amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny dokam-barotra dia manana ny politikany manokana momba ny politikany momba ny angona mpampiasa.
Politika manokana momba ny dokambarotra
Mariho fa ny ExoSpecial dia tsy manana fahafahana miditra na mifehy ireo cookies izay ampiasain'ny mpanao dokambarotra amin'ny antoko fahatelo.
Ny politikan'ny tsiambaratelon'ny ExoSpecial dia tsy mihatra amin'ny mpanao dokambarotra na tranokala hafa. Noho izany, manoro hevitra anao izahay mba hijery ny Politika momba ny tsiambaratelon'ireo tranokalan'ny antoko fahatelo ireo raha mila fampahalalana bebe kokoa. Mety ahitana ny fanaony sy ny toromarika momba ny fomba hialana amin'ny safidy sasany.
CCPA Zo momba ny tsiambaratelo (Aza mivarotra ny mombamomba ahy manokana)
Eo ambanin'ny CCPA, eo amin'ny zo hafa, ny mpanjifa any Kalifornia dia manan-jo:
Angataho ny orinasa iray manangona ny angona manokan'ny mpanjifa iray hamoaka ireo sokajy sy ampahany manokana amin'ny angona manokana izay nangonin'ny orinasa iray momba ny mpanjifa. Mangataha mba hamafa ny angon-drakitra manokana momba ny mpanjifa izay nangonin'ny orinasa iray. Angataho ny orinasa mivarotra ny angona manokan'ny mpanjifa, fa tsy mivarotra ny angona manokan'ny mpanjifa.
Raha manao fangatahana ianao, manana iray volana izahay mba hamaliana anao. Raha tianao ny hampihatra ny iray amin'ireo zo ireo dia mifandraisa aminay.
Ny ampahany hafa amin'ny laharam-pahamehanay dia ny fanampiana fiarovana ho an'ny ankizy rehefa mampiasa Internet. Mamporisika ny ray aman-dreny sy ny mpiambina izahay mba hijery, handray anjara, ary/na hanara-maso sy hitarika ny hetsika an-tserasera. ExoSpecial dia tsy manangona am-pahatsorana na inona na inona momba ny mombamomba ny tena manokana avy amin'ny ankizy latsaky ny 13 taona. Raha heverinao fa nanome izany karazana fampahalalana izany ny zanakao ao amin'ny tranokalanay, dia mamporisika anao mafy izahay hifandray aminay avy hatrany ary hanao ny ezaka rehetra ataonay izahay hanesorana haingana. fampahalalana toy izany avy amin'ny firaketanay.
Raha misy fanontaniana mikasika an'ity politika ity na ireo fomba fanaontsika manokana dia mifandraisa azafady privacy@exospecial.com na oviana na oviana.